Kooxda Jwxo-shiil, oo Geel ka Xaday Reer Wayteen ah – Rasaasa News
Aug 21, 2010 dambile, dilaa, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Kooxda Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, oo Geel ka Xaday Reer Wayteen ah, somalia
Dhanaan – [Aug 20, 2010] – Wararka ka imanaya degmada dhanaan ee gabalka Godey, ayaa sheegaya in bisha August 17, 2010 meel u dhaw ceelka Elale ay dhawr nin oo ka tirsan ciidanka kooxda Jwxo-shiil, ay ka xadeen reer Wayteen ah oo halkaas deganaa.
ciidanka Kooxda Jwxo-shiil, qaar ka mid ah oo ka yimid gabalka Nogob, diidayna in ay raacaan cwxo ee nabada qaatay oo u siisocda dhanka Somaliya, ayaa kolka ay marayaan degaanka dhanaan waxay ku tashadeen in ay geel xadaan si ay uga gataan xadka Somaliya.
Ciidanka kooxda Jwxo-shiil, ayaa geelii ay xadeen waxay ka gateen reer Mareexaan ah oo dool ku joogay degaanka Shilaabo.
Qoladii lahayd Geela ayaa waxay dacwad gaashsiisay ciidanka New Police, ciidankii booliska ee ka daba tagay ayaa waxay heleen geeli ay ciidanka kooxda Jwxo-shiil, xadeen ee ay ka iibsadeen reerka Mareexaan.
Ciidankii Booliska ee loo diray in ay geela u soo celiyaan dadkii lahaa, ayaa waxaa 2 boolis ah dilay reerkii Mareexaan ee Geela gatay. Waxaana dhacday in New Police uu damcay in ay qabtaan gacan ku dhiiglayaashii booliska dilay, nasiib daro waxaa dagaal ku soo qaaday maleeshiyo Mareexaan ah, sidaasna waxaa ku bilowday dagaal.
Dagaalkaas waxaa ka dhashay khasaare xoog leh oo naf iyo maalba leh, dhimashada ayaa gaadhaysa 10 ruux oo shacab ah iyo 3 boolis ah, dhaawaca ayaa gaadhaya 33 ruux.
Dagaalka ka bilowday geela ay xadeen ciidanka baxsadka ah ee ciidanka Jwxo-shiil, ayey kooxdiisu ka dhigeen in ay weerar ku qaadeen 7 saldhig oo ciidan Itobiyan ah, ka dibna ay qabsadeen.
Dabagalaha taageera kooxda Jwxo-shiil, oo aan iyagu wax alaale wax ay la socdaan jirin ayaa 2dii maalmood ee ugu dambaysay waxaa lacago laggaga gurayey dagaal baan galay oo xeryo ciidan baan qabsanay.